21 Sababo Cajiib Ah Oo Lagu Bedelayo Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » 21 Sababo Cajiib Ah Oo Lagu Bedelayo Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Wararka Baxrayn • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • LGBTQ • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Maanta Agaasimihii hore ee UNWTO sanado badan, Mudane Carlos Vogeler ayaa bixiyay 21 Sababo Muhiim ah taas oo lagama maarmaan ka dhigeysa in la helo Xoghayn UNWTO ka duwan
Carlos Vogeler, Agaasimihii hore ee Fulinta UNWTO is ku biiraya laba Xoghaye Guud ee hore Francesco Frangialli iyo Dr.Taleb Rifai, iyo Professor Geoffrey Lipman Ololaha Shabakada Dalxiiska Adduunka ee Xushmadda si loo hubiyo hufnaanta doorashada soo socota ee UNWTO.
Maxaa musharaxnimada HE Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa laga bilaabo Baxrayn waa rajo weyn oo ku saabsan warshadaha safarka adduunka.
Waxaa bilaabay warqad furan oo uu qoray xoghayihii hore ee UNWTO
Francesco Frangialli iyo Dr.Taleb Rifai, oo ay taageereen Kaaliyaha Xoghayihii Guud ee hore Professor Geoffrey Lipman, sidoo kale kii hore Agaasimaha Fulinta ee UNWTO Carlos Vogeler ayaa hada sidoo kale ku baaqeysa in isbedel dhanka hogaaminta ah lagu sameeyo xarunta UNWTO Sekretariat laguna badalo xoghayaha guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili.
21 Sababood oo ah sababta isbeddelada degdegga ahi ay degdeg ugu yihiin UNWTO
1. Laga soo bilaabo 2018, UNWTO waxay u jiifsatay Urur ahaan, mana u soo bandhigin kartideeda xubnaheeda, waxayna fulineysay barnaamij shaqo oo ay aad u yar tahay guulaha laga gaaray wajiyada waajibaadka xoghayeyaasha guud ee hore, Mr. Frangialli iyo Mudane Rifai.
2. Isu dheelitir la'aantaas waxaa sabab u ah saddex sababood oo aasaasi ah: tan hore, la'aanta hoggaanka dalxiiska iyo aqoon la'aanta SG ee hadda jirta, Zurab Pololikashvili, oo gacan ka gaysatay in UNWTO laga dhigo ciyaartoy caalami ah oo aan khusayn, xilli ficillo go'aan leh ayaa loo baahan yahay. Tan labaad, dhaqanka adeegsiga iyo cabsida Zurab Pololikashvili uu ka dhex dhex abuuray shaqaalaha UNWTO tan iyo markii uu qabtay howlaha SG ee UNWTO. Midda saddexaad, oo ah natiijo ka timid labadii hore, taas oo baabi'isay dadaallada ragga iyo dumarka ugu fiican iyada oo la baabi'inayo dhiirrigelinta in loo adeego xubinnimada laguna beddelo jawi cabsi iyo u hoggaansanaan la'aanta xeerarka xafiisyada gudaha iyo adeegga hoggaamiyaha. inay ilaashadaan shaqadooda.
3. Iyadoo la wajahayo sawirkan xun, musharaxnimada Mudane Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa oo ka timid Baxrayn ayaa rajo weyn u ah kuweena taageersan dalxiiska iyo qiimeynta UNWTO, maaddaama astaamaheeda shaqsiyeed iyo xirfadeed ay asal ahaan ka duwan yihiin kuwa hadda jira. SG. Waxay aqoon durugsan u leedahay waaxda, waa maamule xirfad leh oo ka shaqeeya ilaha aadanaha iyo dhaqaalaha, waxayna rabtaa inay wax ka qabato tabashooyinka xubnaha sida mudnaanta la siinayo, iyadoo laga bilaabayo wax kasta oo aan la qaban si wax looga qabto cawaaqib xumada ka dhalatay dalxiiska shirkadda 'Covid-' 19.
4. Xilka loo igmaday, SG-da hadda jirta wuxuu si anshax-darro ah ugu dhaqmaayay habdhaqankiisa maamul, isagoo ka doorbidaya dantiisa shaqsiyeed tan kuwa Ururka.
5. Tusaale cad wuxuu ahaa soo jeedintiisii ​​Golaha Fulinta si loo hormariyo kulanka Golaha la yiri, kaasoo ay ku magacaabayaan SG ilaa Janaayo 18, 2021 magaalada Madrid, marka taariikhdeeda caadiga ah ee dabaaldega ay tahay May 2021.
6. Horusocodka taariikhaha waxay si aad ah u soo gaabisay waqtiyadii loo soo bandhigi lahaa musharaxnimada SG, tan iyo markii laga qaatay Golaha Georgia, iyadoo ku beegan wadanka SG, oo aan xitaa xubin ka ahayn Golaha, Sebtember 17, 2020 , oo xaddidaya muddada soo bandhigidda musharrixiinta illaa Nofeembar 18, 2020 (laba bilood ka hor taariikhda cusub ee Golaha). Caadi ahaan, musharaxnimada waa la soo bandhigi karay ilaa iyo Maarso 2021. Sida iska cad, xaaladani waxay door bidaysaa SG-da hadda jirta iyadoo la xaddidayo tirada musharrixiinta u tartamaya jagada. Xaqiiqdii, kaliya musharaxnimada Bahrain ayaa awooday inay ku timaado waqtigeeda, taas oo gebi ahaanba aan caadi ahayn, maadaama dhammaan doorashooyinkii hore marwalba ay jireen dhowr musharax oo dalal kala duwan ah.
7. Sababta ay SG u siisay Golaha soo jeedintiisa in la sii hormariyo taariikhaha waxay ahayd in laga dhigo mid la jaanqaadaysa FITUR, oo ay codsatay Dowlada Spain, laakiin maalmo kadib Spain waxay go’aansatay in taariikhda FITUR si sax ah loogu wareejiyo bisha. ee bisha Meey iyadoo ay ugu wacan tahay safarka ay wufuudda dalalku ku sugan yihiin bisha Janaayo masiibada jirta awgeed. Si kastaba ha noqotee, SG waxay go'aansadeen inay sii hayaan taariikhda Janaayo sabab la'aan.
8. Dhinaca kale, Gollahan Fulinta ee ugu horreeya sannadka ayaa mas'uul ka ah ansixinta xisaabaadka xisaabtanka, sida ku xusan xeerarka Ururka. Tani waxay noqon doontaa
aan macquul aheyn in la sameeyo maadaama xisaabaadka hantidhawrka la diyaarin doonin ilaa bisha Abriil, sidaas darteedna lagu xadgudbo qawaaniinta.
9. Intaa waxaa sii dheer, xaaladda hadda jirta iyo tan la sii ogaan karo ee bisha Janaayo ee faafida waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in inta badan wufuudda u safraan Madrid si ay uga qeyb galaan shaqsi ahaan kulan muhiim ah, waana inay ku tiirsanaadaan joogitaanka Safiirada iyo / ama qaaciidooyinka kaqeybgalka isku dhafka ah fool-ka-fool iyo khadka tooska ah. Kulan, sida ugu muhiimsan ee kan, ee magacaabaya SG, waa in lagu qabtaa dhammaan dammaanadaha hufnaanta geeddi-socodka doorashada ee sharci ahaanta, taas oo aan u muuqan inay suurtogal ku tahay duruufahaas.
10. Cudur daar ma leh in la sii horumariyo taariikhaha Golaha, marka laga reebo u adeegida danaha SG-da haatan jirta oo ku jirta dadaalkiisa ah in dib loo doorto.
11. Inta lagu guda jiro waajibaadkan, shirarka Golaha waxay noqdeen isu imaatinno bulsheed oo badan oo leh howlo madadaalo badan, oo xaddidaya waqtiga loogu talagalay kulamada iyo doodaha ku saabsan socodsiinta Ururka, taas oo macnaheedu yahay in xubnaha Golaha ay sidoo kale dhibaato ku qabaan gudashada howshooda kormeerka ee shaqada Xoghaynta, oo lagula xisaabtamo Golaha.
12. Inta badan safarada xoghayaha guud, inta badan laga bilaabo 2019 wixii ka dambeeyay, oo ay kujirto sanadka safka faafa ee 2020, waxaa loo aaday wadamada xubnaha ka ah Golaha Fulinta, halkii laga yeelan lahaa qorshe socdaal dheelitiran oo uu ku tagayo gobolada iyo wadamada kala duwan. xubno ka ahaayeen Golaha iyo in kale. Ujeedada aan la sheegi karin waxay umuuqataa mid aad u muuqata in la helo codad, halkii laga heli lahaa adeegyada xubinnimada. Hase yeeshe Ururku wuxuu ka kooban yahay in ka badan 150 waddan oo kaliya maaha xubnaha 35 EC ee magacaabaya Xoghayaha Guud ee soo socda.
13. Xidhiidhkii UNWTO ay la lahayd ururo badan oo caalami ah (WTTC, PATA, WEF, iwm) oo ku saabsan dhinaca dalxiiska ayaa luminayey awoodoodii, saamayntii iyo qadarintii ay ku lahaayeen mudadan.
14. Xoghaynta waxaa lagu abaabulay dano shaqsiyadeed ee SG iyadoo la iska indhatirayo mudnaanta iyo khibrada shaqaalaha. Xubno fara badan oo qiimo iyo khibrad u leh Ururka ayaa ku qasbay inay baxaan muddadan.
15. Marka laga hadlayo Qaaradda Ameerika, Agaasime Gobol waligiis lama magacaabin ka dib markii kii ka horreeyay uu baxay 31-kii Diseembar, 2017. Maareeye Ku-xigeenka Gobolka, oo shaqo fiican qabtay, waxaa loo daayay agab aad u yar, waxaana lagu hayaa awood la mid ah ku xigeenka iyada oo aan la magacaabin agaasime, taas oo muujineysa daneyn iyo fiiro gaar ah baahida xubnaha Ameerika.
16. Agaasimaha Shaqaalaha wuxuu ka tagay Ururka sanadka 2018 isagoo aan ku raacsaneyn dhaqamada anshaxa ee SG ay bilaabeen inay ku soo bandhigaan arimaha la xiriira shaqaalaha.
17. Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda iyo Madaxa Teknolojiyada iyo Isgaarsiinta, oo sidoo kale ka tagay Ururka 2018, waxay dacwad ka dhan ah Zurab Pololikashvili u gudbiyeen maxkamadaha Ururka Shaqaalaha Adduunka (ILO). UNWTO waxay horey u bixisay in kabadan 200,000 euro magdhow macquul ah wixii magdhaw ah ee laxiriira dacwadahaan, magdhawga in, qaddarka ay go'aamiso maxkamadaha, ay tahay inay bixiyaan Xubnaha.
18. Awoodda xaddidan ee falcelinta iyo hoggaaminta UNWTO ee xaaladda hadda jirta ee dhibaatooyinka waaxda dalxiiska ay marayso, musiibada awgeed, ayaa si xun loogu dhaleeceeyay wareegyada dalxiiska caalamiga, iyadoo la isweydiinayo doorka Ururka. Xitaa xubno badan ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin maamulka hadda jira.
19. Musharaxnimada ay soo bandhigtay Bahrain ee Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa waxay matali doontaa haweeneydii ugu horeysay ee madax ka noqota Xoghaynta Ururka tan iyo markii la aasaasay 50 sano ka hor waxayna gacan ka geysan doontaa dib u soo nooleynta ururka iyo soo celinta sharaftiisa anshax iyo maamul ee xubnaheeda.
20. Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa, oo hadda ah Wasiirka Dhaqanka iyo Taariikhda Boqortooyada Baxreyn, waa qof aad looga xushmeeyo bulshada caalamka isla markaana ku raaxeysata sharaf weyn, gaar ahaan UNESCO. Waxay ka shaqeysay mashaariic badan oo caalami ah oo isku xiraya dhaqanka iyo dalxiiska.
21. Waqtiyadan adag, Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa waxay leedahay shuruudo sax ah si kor loogu qaado Ururka iyo dib u hanashada kalsoonida bulshada dalxiiska caalamiga.
Inbadan oo ku saabsan Xushmadda Ololaha Doorashada UNWTO ee WTN: wn.travel/wanaagsan/
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Shabakada Dalxiiska Adduunka: www.wtn.travel